DEG DEG+DHAGAYSO:Dagaal culus oo ka dhex qarxay Ciidamada Somaliland gudahooda & Saraakiil la goostay Gaadiid dagaal + Dhimasho Iyo Dhaawac laga soo sheegayo…. – Puntlandtimes
July 9, 2018 Wariye
GAROOWE(P-TIMES) Wararka Warsidaha Puntlandtimes.com uu ka helayo jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in dagaal culusi uu ka dhex qarxay gudaha ciidamada maamulka Somaliland kadib markii khilaaf xoogani uu soo kala dhex galay ciidamada Somaliland. RIIX OO KA DHAGAYSO WARKAAS OO DHAN
Dagaalkani ayaa la sheegay in uu sababay dhimashada sarkaal ka tirsan ciidamada Somaliland iyo sidoo kale dhaawaca saddex kale oo kamid ah ciidamada Somaliland, waxaana dagaalkani uu yimid kadib markii uu damcay sarkaal ka tirsanaa ciidamada Somaliland in uu la goosto gaadhi nooca dagaalka ah.
Gaadhigaasi oo uu kala baxay sarkaalkani dhintay jiida hore ee deegaanka Tukaraq ayaa waxaa ka daba tagay qaar kamid ah ciidamada Somaliland oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka, kuwaas oo dagaal qadhaadh oo dhex maray labada dhinac kadib ka takhalusay sarkaalkani, waxaana sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay ilaa saddex kale oo kamid ah ciidamada maamulka Somaliland.
Marka laga yimaaado dagaalkani dhex maray ciidamada Somaliland gudahooda ayaa waxaa iyaguna kusoo badnayey ciidamada Somaliland askarta ka goosanaysa kana baxaysa jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq, kuwaas oo sii maraya magaalada Buuhoodle oo ay inta badan kasii gataan qoryahooda dagaalka.
Xaalada deegaanka Tukaraq ayaa maanta kacsan, waxaana xusid mudan in ciidamada Puntland iyo Somaliland ay isku soo dhowaadeen taas oo sababi karta dagaal culus oo dhex mara ciidamada labada dhinac.